Semalt: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny rakipahalalana an-tserasera malaza indrindra - Wikipedia
Wikipedia no hany rakipahalalana an-tserasera izay tantanin'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra. Ny habetsaky ny habaka amin'ity tranonkala ity dia tena goavana tokoa! Raha ny marina dia efa ho telopolo telovitry ny angona izany. Maro ny fanadihadiana no naneho fa ny lahatsoratra Wiki dia manintona mpitsidika an-tapitrisany isanandro.
Nilaza i Julia Vashneva, manam-pahaizana Semalt , fa manana lahatsoratra nosoratan'ireo mpanoratra an-tapitrisany ny Wikipedia Anglisy. Ny fampahalalana rehetra dia maimaim-poana, ary ny Wiki dia nihalehibe taorian'ny nanombohany tamin'ny volana Janoary 2001. Tamin'ny novambra 2001, navoaka voalohany ny fanasongadinana ny pejy voalohany amin'ny Wikipedia. Ny Wikipedia Anglisy dia manana lahatsoratra maherin'ny roa tapitrisa, izay navoaka tamin'ny taona 2007 ary natontan'ny manam-pahaizana ambony tamin'ny taona 2009.
Ny mpamorona an'ity tranonkala ity dia milaza fa ny fiarovana ny lahatsoratra dia asa sarotra satria i Wikipedia dia misokatra ho an'ny rehetra. Tany am-piandohana, i Wales dia nanome an'i Wikipedia misiona mazava: manolotra fahalalana maimaim-poana amin'ny olon-drehetra amin'ny aterineto. Nandritra izany fotoana izany, napetraky ny fitsipika sy fitsipika sasantsasany tokony harahin'ny olona tsirairay. Ny rafitra dia miasa amim-pahombiazana, ary Wikipedia dia izao rakitsary lehibe indrindra sy azo itokisana indrindra eran-tany.
Ny andraikitr'ireo mpirotsaka an-tsitrapo amin'ny fitantanana Wikipedia:
Ny ankamaroan'ny fanitsiana sy ny fanoratana ao amin'ny Wikipedia dia ataon'ny mpilatsaka an-tsitrapo, miaina any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Maro amin'izy ireo no mpitantana tranokala ambony indrindra. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mino fa olona an-tapitrisany no mitantana Wikipedia, fa ny asa goavana amin'ny fiarahamonina kely. Mpirotsaka an-tsitrapo ireo mpitantana azy, ary mifampiresaka tsy tapaka izy ireo mikasika ireo pejy vaovao sy lahatsoratra amin'ny alàlan'ny lisitry ny mailaka amin'ny aterineto.
Ny anjara asan'ny manampahaizana amin'ny wiki
I Britt sy i Matei dia nanoratra boky marika mitondra ny lohateny hoe Structural Differentiation amin'ny Media sosialy: Adhocracy and Entropy. Ity boky ity dia manazava ny fomba nahatonga an'i Wikipedia ho lasa tranonkala ahafantarana azy, ary koa ny rakipahalalana an-tserasera an-tserasera Source .